Yaya iyo Kolo Toure Oo Walaalkood Ka Yaraa Ku Geeriyooday Ingiriiska
HomeAfricaYaya iyo Kolo Toure Oo Walaalkood Ka Yaraa Ku Geeriyooday Ingiriiska
Toure Oyala Ibrahim oo ay walaalo ahaayeen labada ciyaaryahan ee xulka Ivory Coast ee Yaya iyo Kolo Toure ayaa geeridiisa loo soo sheegay xidigahan oo ka mid ah xulka wadankooda ee ka qayb gallaya tartanka koobka aduunka ee Brazil ka socda.
Ciyaaryahanka kooxda Manchester City iyo walalkiisa naadiga Liverpool ayaa walaalkood oo 28 jir ahaa u geeriyooday xanuunka Cancerka oo laga daweynayay magaalada Manchester saacado yar uun kadib ciyaartii labada xidig iyo qarankooda Ivory Coast guuldarada 2-1 ka ah kala kulmeen Colombia.
Xidhiidhka kubada cagta wadanka Ivory Coast ayaa shaaciyey in wakhtiga adag ee ay tacsiyada ku jiraan labadan ciyaaryahan si weyn loo taageero loona muujiyo Ixtiraam , aadna loogu duceeyo.
Warka Geerida Ina Toure ayaa waxaa baahiyey xidhiidhka kubada cagta ee Ivory Coast.
‘Kolo iyo Yaya Toure waxay hadda maqleen warka geerida walaalkoodii ka yaraa, Toure Oyala Ibrahim,’ Ayaa lagu yidhi war rasmi ah oo uu Baahiyey Xidhiidhku.
Yaya iyo Kolo Walaalkood Ibraahim Toure Allah ha u naxariistee
‘Guud ahaan waftiga reer Ivory Coast waxay doonayaan inay taageero u muujiyaan labada ciyaaryahan.
‘Gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta Ivory Coast (FIF) iyo golaha dhexe ee ururku, waxay tacsi u dirayaan qoyskii iyo guud ahaan bahda kubada cagta ee wadanka, ee uu ka baxay Toure Oyala Ibrahim,walaalkii ka yaraa Toure Kolo Abib iyo Toure Yaya Gnegneri, kaas oo ku geeriyooday 19 kii June magaalada Manchester (England).”
Ibraahim Toure ayaa ahaa laacib weerarka uga ciyaarayay mudooyinkii u dambeeyey naadiga Al-Safa’ SC ee horyaalka Wadanka Lubnaan.
Mali Iyo Guinea Oo Loo Qori Tuurayo Maanta Si Loo Kala Saaro Midka Baxaya
Real Madrid Oo Guul Ku Khatintay Wareegga Hore Ee La Liga